Ogaden News Agency (ONA) – Xulafada Maraykanka oo Duqeeyay Kolonyo Daacish Leedahay.
Xulafada Maraykanka oo Duqeeyay Kolonyo Daacish Leedahay.
Diyaaradaha huwanta Maraykanku hormuudka u yahay ayaa weerarro cirka ah ku qaaday kolonyo baabuur ah oo ay leedahay kooxda la baxday Dawladda Islaamka oo Marayey xadka u dhexeeya Libnaan iyo Suuriya, waxaanay ku sii jeeday Ciraaq.
Huwantu waxay sheegtay in aanay gaadiidkii kolonyada ahaa duqaynin laakiiin, ay wadadii ay marayeen oo ku taal bariga Suuriya jareen, isla markaana ay gaadiiid kale oo Daacish leedahay oo aaggaa taagnaa duqeeyeen.
Mar hore ayaa ergayga u qaabilsan Maraykanka arimaha xulufadaas cambaareeyey kolanyadan ay Daacish kaga baxayso aaggaas ka dib markii ay heshiis wada gaadheen ciidanka Libnaan, Ciidanka Suuriya iyo Xisbullaah.
Waxaanu markaa Brett McGurk yidhi “argagixisada waa in goobaha dagaalka lagu laayaa”. Waxaanu sida oo kale sheegay in xulufadu “gacan ka gaysan doonto sidii aragagixisadaas looga hor joogsan lahaa in ay galaan Ciraaq ama ay ka baxaan dhulka kooban ee gacantooda kaga hadhay khilaafad ku sheegoodii”.
Xoogagga Libnaan, Suuriya iyo kuwa Xisbullaah ayaa todobaadkii hore aqbalay xabad joojin ay la galeen mitidiinta Daacish oo ka dhaqan gashay magaalada Raas Bacalbak iyo daafaheeda, maalmo uun ka dib markii ay guluf midaysan ku qaadeen halkii ugu dambaysay ee ay Daacish xoogga ku lahayd ee ku taal xadka labada dal.